Taylaan: Dhulkii dhoolla-caddaynta!
Afeef: Qoraalkani waxa uu ku salaysan yahay waxyaabihii aan ku arkay ama maqlay muddo kooban oo aan ku sugnaa waddanka Taylaan iyo waraysi kooban oo aan la yeeshay gabadh u dhalatay dalka. Taariikhaha, sawirrada iyo dhacdooyinka waxa aan ka soo xigtay degel aan qoraalka dhammaadkiisa ku sheegi doonno.
Odhaahdan ‘Taylaan: dhulkii dhoolla-caddaynta’ (Thailand: the land of smile) maaha mid aan anigu sameeyay ama ku cabirayo dalkan aan dhawaan booqday ee Taylaan balse waa odhaah ku xardhan goobo badan oo ka tirsan dalkan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn iyo goobaha loo dalxiis tago. Madaarka ayaa ah halka u horraysa ee aad ku arkayso odhaahdan iyada oo lagu odhanayo: Ku soo dhawoow Taylaan iyo dhulkii dhoolla-caddeynta. Dalka Taylaan oo loo yaqaano ‘Boqortooyada Taylaan’ waxa uu ku yaallaa Koonfur-bari Aasiya, wuxuuna xad la leeyahay waddamada: Malaysia, Myanmar, Loas iyo Combodia. Waa waddanka kontonaad ee dunida ugu weyn iyo ka labaatanaad ee ugu dad badan. Tiro kor u dhaafaysa 69 milyan oo qof ayaa ku nool. Ereyga ‘Thai’ macno ahaan waa ‘Xorriyad’, ‘Thailand’ –na waxay noqonaysaa dhulkii xorriyadda. Taylaan waa waddanka keli ah ee ku yaalla koonfur-bari Aasiya ee aan la gumaysan. Hore waxa loo odhan jiray ‘Siam’ waxaana magaca laga beddelay sannadkii 1949-kii. Caasimadda Taylaan waa Bangkok. Magaca Bangkok waa magac la soo gaabiyay, magaca saxda ah ee caasimaddanina wuxuu noqonayaa magaca ugu dheer dunida, sidan ayuuna u qormaa: “Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit.” Magacan aadka u dheer badankiisu waa ammaan la amaanayo magaalada waxaana ka mid ah: ‘’Magaaladii weyneyd, magaaladii malaa’igta, magaaladii hoyga u ahayd Budha IWM’’.
Ka dib markii in ka badan 20 milyan oo dalxiisayaal ah ay soo booqdeen caasimadda dalka ee Bangkook, sannadkii 2016 waxa ay kaalinta koowaad ka gashay tobanka magaalo ee loogu dalxiiska badan yahay iyadoo ka hor martay Landhan iyo Baariis isla markaana noqotay caasimaddii ugu horraysay ee ku taal Aasiya ee ku guulaysata kaalintan.
Xilli ku beegan kowdii iyo dhawr daqiiqo ayaan ka dagnay garoonka caalamiga ah ee ‘Suvarnabhumi’ oo sidoo kale loo yaqaano garoonka Bangkok. Garoonkan waa ka ugu weyn uguna mashquulka badan guud ahaan dalka, waana garoonka sagaalaad ee ugu weyn Aasiya. Sidoo kale, waa garoonka labaatanaad ee ugu mashquulka badan dunida. In uu yahay garoon aad u mashquul badan judhiiba waxa aad ku dareemaysa goob kasta waxa ay kugu qaadanaysaa saacad ku dhawaad (Tusaale ahaan, qaybta hubinta caafimaadka qofka waxaan taagnayn 45 daqiiqo, qaybta socdaalkana ‘Immigration’ 39 daqiiqo). Dadka ugu badan ee garoonka loogu adeegayay waxay u badnaayeen dadyow ka yimid meelo fog sida (Maraykan, Kanada iyo Yurub) dadkaas oo badankoodu dalxiis u yimid waddanka. Sidoo kale dadyow kale oo reer Aasiya ah ayaa garoonka buux dhaafiyay.
Dadka reer Taylaan dhaqan ahaan gacanta iskama salaamaan laabtana isma galiyaan balse labada gacmood inta ay isa saaraan ayay wejiga u dhaweeyaan iyaga oo woxoogay madax hoos u dhigaya. ‘Hadba inta aad madaxa hoos u dhigto waa hadba inta aad ixtrimaayso qofka aad salaamayso’, sidan waxa ii sheegtay gabadh reer Taylaan ah mar ay iiga warramaysay dhaqankooda. Dhaqankan gaarka ah ee salaanta ah waa in aad ku baraarugsanaataa gaar ahaan marka aad waddankan booqanayso markaagii koowaad.
Sawir muujinaya salaanta ay dhaqanka u leeyihiin dadka Taylaan. Salaantan waxa loo yaqaanaa ‘Wai’
Astaanta Taylaan waa Maroodi sababtuna waa maroodiga oo ay u yaqaanaan noole awood badan isla markaana meelo badan oo dalka ah ku dhaqan iyo taariikho gaar ah oo uu maroodigu ku leeyahay dhulkan. Tusaale maroodiga waxa ay u adeegsadeen in ay ku difaacaan boqorkooda markii ay dagaalka kula jireen Burma. Waxa kale oo Taylaan ay caan ku tahay deegaan aad u qurxoon oo leh jasiirado kala duduwan oo qurxoon. Jasiiradahan ayaa ah goobaha ugu badan ee loo soo dalxiis tago dalkan. Dadka reer Taylaan waxa ay dhaqan ahaan caan ku yihiin wax beerista. Waxa ugu badan ee ay beeraan isla markaana dhoofiyaan waa bariiska iyo khudradaha kala duwan. Taylaan waa waddamada ugu horreeya ee bariiska u dhoofiya adduunka.
Diin ahaan Taylaan waxa aad looga aamminsan yahay diinta Buudhiisamka. Waxa ku yaal waddanka goobaha lagu cibaadaysto (Temple) kuwooda ugu waawayn dadka diimaha haysta goobaha ay ku dhaqan yihiin. Magaalo hal saac u jirta caasimadda oo magaceeda la yidhaa ‘Panthum Thani’ waxa ku yaalla macbadka Buudhiisamka ee ugu weyn dalka. Waxa goobtan u soo cibaado taga dad ka badan malaayiin sannad kasta waxaana hal mar ku cibaadaysan kara in ka badan hal milyan oo qof. Waxa kale oo ku yaal caasimadda macbad kale oo aad u weyn isla markaana cibaadada ka socota ka sokow ay dad badani u dalxiis tagaan. Diinta labaad ee ku soo xigtaa waa Islaam halka tiro aad u yar oo Kiristan ahi ku nooshahay. Afka koowaad ee waddanku waa ‘Thai’. Dad tiro yar ayaa ku hadla afka indhayarta.
Xagga maamulka waddankan waxaa ka talisa boqortooyo. Boqorka hadda oo magaciisa la yidhaa Maha Vajiralongkorn, waxa uu xilka la wareegay sannaddii 2016, kadib markii aabbihii geeriyooday. Aabbihii ayaa xukunka waddanka hayay laga soo bilaabo 1946-kii. Boqor Bhumibol ayaa xilka kula wareegay da’yaraan kadib markii walaalkii oo boqor ahaa la toogtay. Boqorkaas oo ahaa boqor waddanka la soo maray marxalado aad u kala duwan ayaa dadweynuhuu aad u jeclaayeen isaga oo muddooyinkii u danbeeyayna xaalladiisa caafimaad liidatay. Wuxuu dhintay isaga oo jira 88 sanno. Sida la igu wargeliyay markii aan ku sugnaa boqortooyada Taylaan gudaheeda arrimaha boqortooyada aad looma soo hadal qaado, loogama sheekeeyo, baraha bulshadana lagagama faalloodo sidaas darteed aniga laftaydu waan ka gaabsanayaa intaas ayaanan ku dhaafayaa arrimaha boqortooyada!
Cunto ahaan waxay ay aad u cunaan bariiska iyo kalluunka oo loo sameeyay siyaabo kala duwan. Waxyaabaha aan ka yaabay ayay ka mid ahayd in dadka reer Taylaan ay bariiska ku quraacdaan, ku qadeeyaan isla markaana ay ku casheeyaan! Cuntada dalkan oo loo yaqaan ‘Thai food’ waa cunno waddanka gudihiisa iyo dibbadiisa aad looga cuno iyada oo caan ku ah basbaas iyo dhandhanaan. cuntada ugu caansan waxa la yidhaa ‘Pad-thai’ waxaana laga sameeyaa bariis sida baastada loo sameeyay. Badanka waxa lagu sameeyaa cuntadan digaag, kalluun, khudrad ama cunto badeed kale sida ‘Shrimp’.
Muuqaalka Cuntada ‘Pad-thai’
Isma lahayn weligaa waxa aad la kulmi doontaa tobaneeyo khudradood oo aanad weligaa arag. Taylaan waxa ay caan ku tahay khudrado kala duwan, qaar iyaga gaar u ah iyo qaar ay la wadaagaan waddamo kale oo Aasiya ah. Khudradahan oo aad ii soo jiitay kala duwanaanshahooda iyo dhadhankooduba waxa aan tusaale u soo qaadan doona dhawr khudradood oo waddankani caan ku yahay.
Khudraddan oo laga yaabo in dad badani gartaan aniga waxa ay ahayd markii iigu horraysay ee aan arko. Khudraddan oo sida la sheego caan ka ah qaybo badan oo maraykanka ah ayaa sidoo kale waddamo badan oo Aasiya ahna aad looga cunaa. Pitaya oo sidoo kale loo yaqaano khudraddii Dragon-ka waa khudrad leh dhawr midab (casaan iyo cadaan). Dhadhan ahaan waxay u dhowdhowdahay xabxabka.
Mangosteen waa khudrad caan ka ah goobo badan oo Aasiya ah. Waa khudrad dhanaan iyo macaan iskugu jirta isla markaan leh nafaqo iyo faa’idooyin caafimaad. Dhadhan ahaan iyo muuqaalka midhaha khudraddan waxay iila eekaayeen aniga canbaha loo yaqaan ‘Cambe caad-ka’
Khudraddan waxa ay ahayd tii iigu la yaabka badnayd ee aan ku arko Taylaan. Durian sida khudradaha. kale ee kor ku xusan waxa laga helaa waddamo badan oo Aasiya ah. Inkasta oo ay khudraddani tahay khudradda ugu urta dheer/xun adduunka haddana waxa lagu magacaaba boqorka khudrada ‘King of Fruits’. Ur xumada ay khudradani leedahay waxa ay sababtay in laga mamnuuco guud ahaanba gaadiidka dadweynaha. Dadku waxa ay yidhaahdaan: waa khudrad ur xun balse dhadhan macaan, balse urteeda darteed waan ku dhici waayay in aan dhadhamiyo.
Intaanan cuntada ka bixin yaanan idinka illaawin in ay waddankan caadi ka tahay cunnida masaska, raha, ayaxa, dirxiga badda iyo dibi-qallooca.
Barnaamijka aan u tagay Taylaan waxa uu ahaa barnaamij uu qabanqaabiyay urur laga leeyahay dalkaas oo la yidhaa ‘World Peace Initiative’ loona soo gaabiyo ‘WPI’. Ururkan ayaa sida magaciisa ka muuqata ka shaqeeya amuuraha la xidhiidha nabbadda gaar ahaan waxa ay xoogga saaraan nabadda qofeed ama xasiloonida shaqsiga ah. Waxa ay halhays u leeyihiin ‘qof qalbiggiisu nabdoon yahay baa nabad abuuri kara’. Mashruuc ka mid ah mashruucyada ururka oo la yidhaa ‘Peace Revolution’ ayaa uu qayb ka ahaa barnaamijkayagu. Barnaamijka waxa uga soo qaybgalay 31 dhallinyaro oo ka kala yimid 26 waddan oo Afrika ah. Barnaamijkan oo la soo qabanayay muddo saddex sanno ah waxa aan noqday qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee ka soo qaybgala. Barnaamijku waxa uu ka dhacay tuulo ku taal koonfurta Taylaan oo la yidhaa Loe. Guud ahaan waxa uu ka koobnaa shirar, doodo, muxaadarooyin iyo ‘meditation sessions’.
Muuqaal soo koobaya dhacdooyinkii barnaamijka halkan ka daawo: https://vimeo.com/253593948
Degelada ururku ku leeyahay barta internetka: https://wpifoundation.org/ iyo https://peacerevolution.net/
Way iga dhan tahay!
Muna Axmed Cumar (Mullaaxo)
3. Wareysi gaar ah, Fenz: gabadh u dhalatay Taylaan.
Posted by Muna Ahmed at 9:19 AM No comments:
Posted by Muna Ahmed at 8:36 AM No comments:
Kaaf iyo kala dheeri!
Waagu marka uu iftiimo ayay ka baxdaa gurigooda una jarmaaddaa goob shaqo oo ay ka shaqayso. Shaqadeedu waa joogto waliba waxa u dheer siminaarro ay wiiggiiba laba jeer ka qayb gasho. Galinka danbe waxa ay waxbarasho u aaddaa jaamacadda iyadoo ku jirta sannadkii u danbeeyay.
Hammigeeda iyo himiladeeda waxbarasho waxa ay gaadhsiisan tahay meel fog. Waxa ay hiigsanaysaa meel dheer, in badan bay waxbarashadan wadiddeeda ku samirtey, saaxiibaddo badan oo dheega ay isku hayn jireen way ku cidleeyeen socodkan iyo hayaankan dheer. Waxbarashada marka ay dhammayso shaqo tan ka wanaagsan oo ka mushahar badan ayaa maankeeda ku jira “Galin hore iyo ku danbeba waad shaqayn, oo doollarkaa ku daba carari”, ayaa maskaxdeeda ku qufulan.
Tacab iyo dadaal in ay nolosha sareedadeedu ku timaaddo, horumarka iyo hore u socodkana in ay gacanteeda ku keensan karto ayay aamminsantahay. Dhayal iyo guri iska fadhi bari hore ayay dhinac iskaga tuurtay inannimo iyo hawlihii guriga hadday noqoto wax karin, wax dhaqid, iyo wax nadiifin toona xaafaddoodu kuma hallayso. Oo miyay garanaysaa baa ka horraysa?! Waligeed fijaan sii jeeda may soo jeedin koob shaah ahna dabka may saarin, miyay haleelaysaaba?! sowtan ku mashquulsan akhriska iyo muraajacada duruusta iyo hawl maalmeedkeeda la xidhiidha shaqadeeda.
Cibaado waxa aanu jaar ahayn muddo fara badan, maalintii aanu soo degnay xaafadda iyadu way degganayd. Iyada iyo qoyskeedu waxa ay ku nool yihiin aqal soomaali wayn oo albaabkiisu u jeedo cadceed ka soo baxa. Aqal soomaaliga ka soo horjeedkiisa waxa ka dhisan buul yar oo dayac aad u badani ka muuqdo oo ay Cibaado iyo qoyskeedu wax ku karsadaan.
Cibaado afartan sanno ayay jirtaa, afar ubad ah ayuuna Ilaahay siiyay. Odaygeeda Caalin waa oday dhuuban dheer da’ina ay ka muuqato, waxa uu waligiiba ka shaqayn jiray dhismaha guryaasha. Waagii uu xoogganaa wastaadnimada oo uu xariif ku ahaa ayuu ku shaqaysan jiray imika se mar mar ayuu kuulinnimo dirqi ku helaa.
Posted by Muna Ahmed at 9:46 AM No comments:
Waa maalintii ugu horreysay ee uu yimid dugsiga. Waxa uu gashan yahay surwaal madow oo ka gaaban, shaadh cad oo gacmo dheer iyo kabo sandal ah oo duug ah. Saliid uu ku soo dhaashaday ayaa madaxa iyo wajigaba ka dhalaalaysa wajigiisana waxa ka muuqata farxad. Waa uu baalla daymoonayaa oo kolba indhaha la raacayaa dhismayaasha kala duwan ee dugsiga, waxa uuna fiirfiirinayaa fasallada. Ma garanayo fasalkiisu halka uu yahay taas ayaana ugu wacan in uu akhriyo fasal walba magaca ku hor qoran “Fasalkaagu waa 1A” ayuu ka xasuustaa tilmaantii uu maamulaha dugsigu soo siiyay markii uu xafiiska ka soo baxayay.
Posted by Muna Ahmed at 5:45 PM No comments:
Posted by Muna Ahmed at 5:39 PM No comments: